Shariif Sheekh Axmed Oo Ku Dhawaaqey Inuu Yahay Musharax Madaxweyne Doorashada 2020 | Gaaroodi News
Shariif Sheekh Axmed Oo Ku Dhawaaqey Inuu Yahay Musharax Madaxweyne Doorashada 2020
January 24, 2019 | Published by: kabeeye
Moqdisho (Gaaroodi-News):- hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u sheegay wargeys ka soo baxa dalka Kenya inuu markale u tartami doono xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ahaa Madaxweynihii dowladii kumeelgaadhka aheyd intii u dhexeysay 2009-2011,waxana uu sheegay inuu doonayo in uu dib abuuro Soomaali mideysan oo awood leh.
Wareysi uu siiyay wargeyska The Standard ayuu Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ku sheegay in xilligii uu hayay talada dalka Soomaaliya uu ku guuleystay dagaalkii lagula jirey Al-Shabaab balse markii uu kursiga baneeyay ay awoodii Al-Shabaab dib u soo laabatay.
“Xilligii aan Madaxweynaha ahaa waxaan ku guuleystey inaan dib u soo celiyo amaankii Soomaaliya wadankana waan mideynay.”ayuu yidhi Sheekh Shariif toddobaad kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen dhisme ku yaal magaalada Nairobi.
“Waxaan dadaal u geli doonaa sidii beesha caalamka ay qeyb uga qaadan lahayd xoojinta awoodda ciidamada Soomaaliya.”ayuu sii raaciyay Shariif Sheekh Axmed.
Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa labo bil ka hor ugu dhowaaqay xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaamiye u yahay.
“Waxaan cadeynayaa inaan calanka u qaadi doono xisbiga Himilo Qaran doorashada 2020,Waxaan dareensanahay in dowlada hadda ka jirta dalka aysan waxba u qaban dadka waxaana doonayaa in aan mideeyo Soomaaliya oo aan ka dhigo mid awood leh.”ayuu yiri Sheekh Shariif.
Wargeyska Standard ayaa daabacay in kahor intaan loogaga guuleysan doorashada uu Sheekh Shariif dad badan aaminsanaayeen inuu yahay “Aabaha Soomaalida Cusub” maadama uu horseede u noqday dal muddo labaatan sano burbursanaa uuna noqday hogaamiyihii Maxkamada Islaamiga.
Xilligii uu hogaanka dalka hayay ayay dowladii uu hogaaminayay ee ahayd mid kumeel gaar ah waxa ay ku guuleysatay inay ka saarto Al-Shabaab caasimada dalka ee Muqdisho iyo deegaanada u dhow dhow iyadoo kaalmo laga helayay ciidamada Midowga Afrika.
Sidoo kale waxaa lagu xusuusta maamulkii Sheekh Shariif oo ahaa Madaxweynihii 7aad ee Soomaaliya in ay horumarisay dastuurkii dalka isla markaana la abuuray ciidamo Boolis,Milatari iyo Maxkamado.